Wararkii ugu dambeeysy kulamada saaxibtinimada ee Habeen dambe (Dhaawacyada ciyaartooyda oo kordhay) | Sports, Ciyaaraha Caalamka iyo gudaha	SOOMAALIDA MAANTA
Wararkii ugu dambeeysy kulamada saaxibtinimada ee Habeen dambe (Dhaawacyada ciyaartooyda oo kordhay)
Xidigo badan ayaa waxaa hareeyay dhaawacyo ka hor inta aan habeen dambe aduunku marti galin ciyaaro saaxibtinimo oo badan.
— Xidiga khadka dhexe ee kooxda Barcelona Alex Song ayaa lagu soo waramaya in uu ka maqnaan doono xulkiisa Cameroon oo kulan saaxibtinimo la ciyaari doona xulka Tanzania ciyaary ka dhici doonta magaalada Dar es Salaam,kadib markii la sheegay in uu jilibka ka dhaawacan yahay.
— Xulka Azzuri ayaa gurigiisa udiray weeraryahanka kooxda Juventus Sebastian Giovinco kaas oo la sheegay in markii uu tagay xarunta tababarka ee Azzuri shalay lagu arkay dhaawac ,waxaana uu seegi doonaa kulanka Holland iyo Italy.
— Daafaca kooxda Chelsea iyo xulka Brazil David Luiz ayaa lagu soo waramaya in ay macquul tahay in uu wadankiisa ka maqnaado kulanka saaxibtinimada ee habeen dambe ay la ciyaarayaan xulka England dhaawac dartii ,iyadoo kulankaas lagu maamusi doono 150 guurada FA –ga England.
2 Comments for “Wararkii ugu dambeeysy kulamada saaxibtinimada ee Habeen dambe (Dhaawacyada ciyaartooyda oo kordhay)”
Ismacil cali cabdullahi	06/02/2013 - 7:31 am	Asc waan e din salamay warbahinta watageraha United iyo Spain hadan hore ugalo Spain 3
Egland 2 -2
Reply	Oscar yare	07/02/2013 - 4:28 am	David luiz hogamiyaha barasil wana dafaca calamka ugufican hada